Kaatoliga caalamka oo soo dhaweeyay Kaniisada Hargaysa – Idil News
Kaatoliga caalamka oo soo dhaweeyay Kaniisada Hargaysa
Posted By: Idil News Staff July 30, 2017
Sida uu qortay Website ku hadlay afka Kirishtanka oo lagu magacaabo Catholic World Report ayaa xaqiijiyey in Baadari Giorgio Bertin oo ah baadariga Dalka Jabuuti iyo waliba Maamulaha qaabilsan Magaalada Muqdisho uu Magaalada hargeysa ka daah furay Kaniisada the Church of St. Anthony of Padua waana kaniisada kaliya ee Soomaaliya ka furan, 27 sano kadib sida ay sheegeen.
Qoraalka Wargayska oo ay cinwaan uga dhigeen “Bulsho yar oo Kaathoolig ah ayaa Soomaaliya keenay iftiinka rajada”.
Kaniisad yar oo aan ka furnay Hargeysa waqooyiga Soomaaliya ayaa ah chapter cusub oo Soomaalida yar ee Masiixiga ah uga furmay wadanka dagaaladu aafeeyeen, hoygana u ah Alshabaab iyo Alqaacida.
Reporka ayey kaga hadleen Xarakada Alshabaab iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka sameyso iyo siday ula dhaqmaan bulshada Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in xitaa dagaalka ay u gudbiyeen wadamada dariska ah.
Waxay kaloo sheegeen meel ay Alshabaab joogto in ay adag tahay diimo kale inay ugu noolaadaan si xor ah, waxayna sheegeen in lagu daldalaayo, ama xabad lagugu dilaayo.
Waxay kaloo kaga hadleen Qoraalkooda Gaaladii Soomaaliya ku noolaan jirtay iyo Kaniisadihii ku yaalay Xamar Dowladii Siyaad Bare.
“1989 ayaa waxaa lagu dilay Kaniisadda dhexdeeda baadari Pietro Salvatore Colombo oo ahaa Baadaariga kaliya ee Kaatholik ah ee joogay Soomaaliya, wuxuu ahaa 67 jir wuxuuna Diinta Krishtanka ku faafinayey Soomaaliya 43 sano, Madaxweyne Siyaad barre ayaa ku eedeeyey dilkaas kooxo argagixiso Islaami ah, balse waxay aaminsanyihiin in isagu amray dilka Baadariga si uu u soo afjaro eedeymaha Dowladiisa uga imanayey Baadariga”.
Waxay Reportka sidoo kale kaga hadleen kadib burburkii iyo sidii Kaniisadihii loo burburiyey, waxayna sheegeen inay Baadariyaashii iyo Gabdhihii u joogay Soomaaliya ay gabaad ka dhigteen Iskuul ku yaal Muqdisho ayna isaga baxeen 1998 dii kadib markii la afduubtay gabar kamida baadariyaasha.
Furitaanka Kaniisada Hargeysa:
Baadariga Jabuuti ee Bertin lagu magacaabo wuxuu sheegay inay Hargeysa ka fureen Kaniisadii ugu horeeysay 27 sano kadib, wuxuuna cadeeyey inay Hargeysa aad uga soo dhoweyn badan tahay marka laga eego Muqdisho.
Baadiraga Bertin ayaa sidoo kale sheegay in Kaniisada hargeysa uu ku sugan yahay Baadari joogto ah shaqaduna ay usocoto si wanaagsan kooxo kalena la shaqeeyaan, wuxuuna xusay inay wali si hoose u wadaan howlahooda shaqo.
Munaasabadii lagu daahfurayey Kaniisadan ayaa waxaa kasoo qeyb galay 10 qof Masiixiyiin iyo baadariyaal wadamada dariska ah, waxayna sheegeen inay muhiim u tahay inay ka dhisaan kaniisad Kaathoolik ah Soomaaliya, waxayna sheegeen inay Kaniisadaan hada isticmaalaan shaqaalaha Hay’adaha Hargeysa ka howlgala, waxayna sheegeen inay bilaabi doonaanaan howlahooda adeegyada bulshada iyo Gaalaysiinta.
Baadiriga ayaa sheegay inay ugu yaraan deegaano kamida Soomaaliya ay ka dhiseen Kaniisad, balse aysan caasimada ahayn, taas oo aan wali amaankeeda la isku halayn karin.
Report ayey sidoo kale kaga hadleen Hargeysa iyo Amaankeeda iyagoo sheegay in si xor ah aad shaaricyada u mari karto aadna la qaxweyn karto bulshada reer Somaliland.
Waxay kaloo ka hadleen doorashada Soomaaliya ee Madaxweyne Farmaajo iyo qabiilkiisa waxayna sheegeen inuusan macno weyn u lahayn, balse uu haysto fursad uu amaan kaga dhigi karo Soomaaliya, isagoo wadahadal la gala Alshabaab, Raiisul wasaaraha iyo Qabiilkiisa ayey ka haleen waxayna sheegeen in Qabiilka Raiisul wasuuruhu ay u badan yihiin madaxda Alshabaab ayna fududayn karto wada hadlo lala galo Alshabaab.
Ugu dambayntii Waxay kusoo gabagabeeyeen Alshabaab iyo weeraradooda argagixiso ay ka fuliyaan Soomaaliya iyo wadamada gobolka.
Hoos ka akhriso warbixinta oo English:-